४ वषदेखि नियमित याै न शाेषण, अन्तिममा सहनै नसकेर बला त्कारकाे मु द्दा
भाद्र २५, पोखरा । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका लेखा अधिकृत युवती बला त्कार अभियोगमा अन्ततः प क्राउ परेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ मासबार घर भइ अस्पतालमा कार्यरत् लेखा अधिकृत ३७ वर्षीय बामदेव सुवेदीलाई कास्की प्र’हरीले मंगलबार उनकै निवासबाट प क्राउ गरेको हो ।
अस्पतालमै कार्यरत २ जना महिलाले सुवदीले आफूहरुलाई जबर्जस्ती बला त्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अनुसन्धानका लागि प’क्राउ गरिएको कास्की प्र’हरी प्रवक्ता प्र’हरी नायव उपरीक्षक सुवास हमालले जानकारी दिए ।
४ वर्षदेखि याै न शाे षण
श्रीमानको दु र्घटनामा ज्या’न गएपछि श्रीमतीले हिमालयन आँखा अस्पतालमा जागिर पाइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी ती महिलामाथि सोही अस्पतालका लेखा प्रमुखको आँखा लाग्यो ।
आर्थिक अभाव हुँदा अस्पतालको लेखा शाखामा ती महिलाले पेश्की माग्थिन् तर प्रमुखले अनेक सर्त राख्न थाले ।
यौ न इच्छा पूरा गर्न दिए अस्पतालबाट पेश्की मिलाइदिने भन्दै ड’र ध’म्कीमात्रै देखाएनन्, कोठामै पुगेर अभ’द्र व्यवहार गर्न लागेको ती महिलाको आ’रोप छ । आर्थिक हिसाबले कमजोर ती महिलाको लेखा प्रमुखका अघि केही जोर चलेन । यस्तै घ’टना ४/५ वर्ष चलिरहेको ती महिलाको आ’रोप छ ।
अति भएपछि गत शुक्रबार ती महिलाले अस्पताल प्रशासनमा उजुरी दिइन् । अस्पतालका लेखा प्रमुखले डर, धम्की, प्रलोभन देखाएर यौ न शो षण गरेको र घ’टना बाहिर ल्याए जागिर नै खाइदिने बताएको महिलाको आ रोप थियो ।
अस्पताल प्रशासनले लेखा प्रमुखलाई तत्काल नि’लम्वन गर्यो र अनु’सन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
अस्पतालले मेडिकल डाइरेक्टर डा. इन्द्रमान महर्जनको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरी दो’षी उपर का’रबा’ही गर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अस्पतालले बताएको थियो ।
यसैबीच प्र’हरीमा जाहेरी नदिन द’बाब दिइएको र भित्रभित्रै मिलापत्र गराउन खोजिएको घ’टना सार्वजनिक भयो ।
जब यो घ’टना बाहिर आयो, लेखा प्रमुखबाट यस्तै शो षणमा परेको भन्दै अर्की महिलाले पनि प्र’हरीमा जाहेरी दिइन् । अस्पतालबाट पेश्की माग्दा लेखा प्रमुख सुवेदीले अनेक बहाना बनाएर यौ न शो षण गरेको महिलाहरुको आ रोप छ ।
‘पेश्की माग्न जाँदा शरिर माग्थे, घरमै आएर मनपरी गरे । घ’टना बाहिर ल्याए जागिरै खाने ध’म्की दिन थाले,’ पीडित महिलाले भनिन्, ‘यसरी ४/५ वर्षसम्म शो षण गरिरहे । अति भएपछि उजुरी गरेकी हुँ । अझै पनि केही हुने हो कि मनमा ड’र छ ।’
दुई महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले आ’रोपी लेखा प्रमुखलाई प’क्राउ गरी अनु’सन्धान अगाडि बढाएको छ । ‘प’क्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता सुवास हमालले भने, ‘महिलाको मेडिकल रिपोर्ट आएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’
मृत्यु भएकाहरुकाे किर्ते कागज बनाएर वृद्धाभत्ता खाएकाे भन्दै वडाध्यक्ष र सचिवलाई कालाेमाेसाे
सुनसरी महाेत्सवमा भोजपुरी कलाकारलाई प्रहरीले रोकेपछि दर्शकले जलाए ४ वटा गाडी, स्टेज तोडफोड